Tag: virtual mubatsiri | Martech Zone
Tag: chaiye mubatsiri
Dzidza Maitiro Ekuwedzera Mari NeKusunga Iyo Inotyisa Simba reYako Tiny Tsvaga Bhokisi
China, August 27, 2020 China, Gunyana 17, 2020 Vadivelu Comedy Vivek Sriram
Kutsvaga ndiwo mutauro wepasirese. Uye bhokisi rekutsvaga ndiro portal kune ako ese mhinduro. Kumba uchirota pamusoro pesofa nyowani yeimba yako? Google inonyanya kurara pamibhedha yedzimba diki. Kubasa kuyedza kubatsira mutengi kunzwisisa kwavo kunyorera sarudzo? Tsvaga yako intranet kune yakanyanya-kusvika-nguva mitengo uye ruzivo rwekugovana navo. Pakukwirira kwekuita, tsvaga uye tarisa zvinowedzera kumusoro uye pasi mutsara. Vatengi vanotenga zvakawanda uye vagare vakavimbika,
Conversica: Bata, Shingairira, Kurera uye Unokodzera Uchishandisa AI Mubatsiri
Chipiri, Zvita 12, 2017 Chishanu, December 15, 2017 Douglas Karr
Conversica inopa otomatiki mutengesi mubatsiri inofambiswa neyakagadzirwa njere software. Iye mubatsiri anoshanda kungofanana neanotengesa munhu mubatsiri, achisvika kune yega yega yekutungamira kwako uye nekuita yega yega mukutaurirana kwevanhu. Vanhu vanozvida nekuti mubatsiri ane hunhu, ane hushamwari uye anoteerera, achivabatanidza nekukurumidza nemunhu anogona kubatsira. Tiri mune AI chitubu. Ini ndinofunga kukambani yega yega, iyo shanduko mune data sainzi ichaita zvakanyanya
Ramangwana Harina Basa uye Harina Kuitika
Chipiri, August 2, 2016 Douglas Karr
Paranoia maererano neramangwana rehungwaru hwekunyepedzera, marobhoti, uye otomatiki zvinofanirwa kumira. Yese maindasitiri nehunyanzvi shanduko munhoroondo yakavhura vanhu kusvika pamukana usinga gumi wekushandisa kwavo tarenda uye kugona Haisi yekuti mamwe mabasa haatsakatika - hongu ivo vanoita. Asi iwo mabasa anotsiviwa nemamwe mabasa. Sezvandinotarisa-tarisa muhofisi yangu nhasi uye ndichiongorora basa redu, zvese zvitsva! Ndinoona nekupa pane yedu AppleTV,
Uri kunetswa naNoobs?
China, May 22, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Imwe yemabhenefiti (vamwe vanhu vanofunga kuti chituko) yekuve vakapindwa muropa nehunyanzvi, er… savvy, ndeyekuti munhu wese anogara achikukumbira rubatsiro. Shamwari yangu yakanaka uye wandinoshanda naye Hoosier, Patric aka Mr. Noobie, akagadzirira zvizere kutora mutoro uyu pamafudzi ako! Patric anga aine webhusaiti iri kukura, Noobie, pamusoro pegore rapfuura asi iyo ichangobva kuvandudzwa dhizaini uye kuvhurwa kunoshamisa! Noobie, Inc. ine glossary, odhiyo uye vhidhiyo